အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: March 2009
Posted by တီချမ်း at 3:11 PM 18 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 12:51 AM 12 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 12:13 AM 37 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 7:10 PM 10 comments: Links to this post
စိတ်ဆိုးကြနဲ့နော် ပြီးတော့ လိုက်လဲတိုင်းကြနဲ့အုံး ပြီးတော့ လူမြင်ကွင်းမှာလဲ တူညားတွေရဲ့လက်မကို ကြာကြာငေးကြည့်တာကောင်းဘူးတဲ့လေနော် ဒါပဲ
အောက်မှက အော်ရီဂျင်နယ်ပါနော်..........အဟစ်အဟစ်အဟစ် ရယ်ချင်နေသေးတယ် (တီချမ်းမကောင်းဘူးနော်)ခစ်ခစ်ခစ် ခိခိခိ ခွိခွိခွိ ဟားဟားဟား ဟီးဟီးဟီး အဟွင်းဟွင်းဟွင်း ငှဲငှဲငှဲ ငွီးငွီးငွီး
ညနေ ၄း၀၀ နာရီ
မတ်လ ၂၇ရက် သောကြာနေ့
Posted by တီချမ်း at 3:36 PM 16 comments: Links to this post
Labels: ဆိုက်ကိုတက်စ်, ဗဟုသုတများ
ဂုဏ်တင့်တယ်လေး ...။ ။
Posted by တီချမ်း at 12:12 PM7comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 11:51 PM 15 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 2:43 AM 14 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 1:02 AM3comments: Links to this post
အားလုံးကိုတော့ မပလိစ် နိုင်ဘူးလို့
အဲတော့ ပလိစ် သလောက်ပေါ့ကွယ်နော်
(အခုတော့လဲ ဟိုတနေ့ ကသေမလိုဖြစ်နေတာ
Posted by တီချမ်း at 4:32 PM 16 comments: Links to this post
တခါတုံးက ဆွဲခဲ့တဲ့ အမှတ်တရလေးပါ
E L လို့ခေါ်တဲ့ လူတယောက် နဲ့ သိခဲ့ဖူးတယ်
၂၁ရက်။ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၀၇ ခုနှစ်။
သူနဲ့ ကိုယ်က ကပွဲခန်းမအလယ် မှာစတွေ့ခဲ့တာပေါ့
ကိုယ့် ခံစားချက်တွေ ကို သိမှာပါ.....................
ဒီပုံလေးက ခံစားမိတုံးက ခြစ်ထားတာပါ
ဘယ်တော့မှပြန် “မရ” လောက်တော့ဘူးထင်တာပဲ
အချစ်စစ် ကိုမတွေ့ဘူးဖူး လို့
ဒါမှ တီချမ်း တကယ့်ကိုအပြင်းစားခံစားထားတာပါ)
ဒါလေးက ကိုယ့် လက်ရေးမူ မူရင်းလေးပါ
ကိုယ် ဆော့ရတာ ရိုးသွားလို့
A Chen 11th Feb 2008
Posted by တီချမ်း at 7:34 PM 17 comments: Links to this post
ဘာတင်ရမလဲ မသိတာနဲ့ ရေးထားပြီးသားထဲက ပဲ တင်ပေးလိုက်တယ်
အခုတလော စိတ်က ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး
မုဒ်တွေ က မကောင်းဘူး
အခုတော့ သီချင်းတင်တတ်သွားလို့ အမ်တီဗီ ပါတင်ပေးလိုက်တယ်နော်
ငါက ရေကန်နားက ခိုဖြူဖြူလေးတွေကိုသတိရမိပါရဲ့
ချိုမြိန်မှုတွေ ပြိုလဲ ကုန်ဆုံးပြီ
စိတ်တွေ အသိမဲ့၊ ဆောက်တည်ရာမဲ့ ချောက်ချား
မင်းကတော့ သီချင်းကို ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းညည်းဆိုရင်း
အချိန်တွေ ကွယ်ပျောက်သွားပြီ ကုန်ပြီ သွားပြီ
အချစ်က ရွေးချယ်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်ရတော့
မင်းက အေးစက် ဆွံ့အ…….
၀မ်းနည်းမှုနဲ့ စခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်း
တချို့အချစ်တွေက ဒီလောက်အထိပဲ ပေးနိုင်တာ…
အတိတ်တွေ၊ အမှတ်တရတွေ ထည့်ထားတဲ့………
ဂီတ သေတ္တာလေးကတော့ လည်နေတုံးပဲ………….
ဒီမှာက အော်ရီဂျင်နယ် တရုတ်လိုပါ
နားလည်တဲ့ သူတွေ ယှဉ်ကြည့်လို့ရအောင်ပါ
开心与不开心　一一细数着　你再不舍
Posted by တီချမ်း at 1:37 AM7comments: Links to this post
ရန်သူကငါ့ကို ဓါးနဲ့ခုတ်ရင် သွေးတွေပွက်ထွက်ပစေ
ငါ့ညီအကို တပ်သားတို့ ၀ိညဉ်တွေ တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေလဲ
ငါတို့ သွေးတွေမြေကျပစေ ငါတို့မမှု
နေစရာ မလိုပါ သေနေ့ မွေးနေ့
လေနဲ့အတူ “ငါ” ဆိုတဲ့ “ငါ”
ဝေလွင့် ပျောက်ခွာ ပါရစေ
ငါ့ကို လာကြည့်ရင် သာ
Posted by တီချမ်း at 1:37 AM 16 comments: Links to this post
ငါတော့ နင့်ရဲ့ ဖွဖွအပြုံးလေးနဲ့လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်
ငါကအခု နင့်ကိုသိပ် သိပ် သိပ်လှတဲ့
နင် ဆီ မှာအခု ဘယ်လိုရာသီလဲ?
နွေဦးလား နွေလား ဆောင်းဦးလား ဆောင်းလား
စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းတာ ပူလောင်တာတွေကရော
ငါကတော့ အေးစက်စက် ဆောင်းထဲမှာ
နွေဦးရာသီ ရဲ့ ဥယျာဉ်ထဲမှာ
ဟိုးအရင်တုံးကတော့ ငါလဲ ငါးကန်ထဲကငါးတွေလိုပဲပေါ့
ရှေ့တိုး၊ ကိုယ်လှည့်၊ ရှေ့တိုး၊ ကိုယ်လှည့်၊ ရှေ့တိုး…………. ကိုယ်လှည့်………………
နောက်ကျတော့ ငါးကန်ကြီးရဲ့အပြင်လောက ကိုရောက်တော့လဲ အရင်လမ်းဟောင်းတိုင်းပဲ
ဒီလိုနဲ့ပဲ တဖြည်းဖြည်းချင်း အပြင်လောကကြီးမှာ
ငါ အလိုက်သင့်အလျားသင့် ရှေ့တိုး တတ်လာတယ်၊
လှလှပပ ကျကျနနလေး ကိုယ်ကိုလှည့်တတ်လာတယ်
ဘာလိုလိုနဲ့ သူ့အလိုလိုလေ့ကျင့် ပြီးသားဖြစ်သွားရော
ပြီးတော့ အမြဲ အေးအေးဆေးဆေး လေးလေးနက်နက်နဲ့
တခုတခုကို တွေးနေသလိုပုံစံလေးနဲ့ ဟန်ဆောင်ပြီးနေတတ်လာတယ်လေ……………..
အပြင်မှာ နေသာနေပြီ အိမ်ထဲမှာတော့ မိုးရွာနေတုံးပဲ
ဆည်းဆာတုံးက ပင်လယ်နားမှာ ကျောက်တုံးတတုံးနဲ့တွေ့တယ်
သူက သူ့ကို ခရီးထွက်ဖို့ခေါ်သွားပါလားလို့ ပြောလာတယ်
အဲဒါနဲ့ ကျတော် က
“မင်းကိုငါ မနိုင်ဘူး ဒါပေမယ့် မင်းအတွက် ပြတင်းတပေါက်တော့ ဖွင့်ပေးနိုင်တယ်” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ တနွေလုံးလုံး ကျတော် ခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့
အံ့မခန်းဆန်ဆန် ပြတင်းတပေါက် သူ့အတွက်ဖွင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်
ကျောက်တုံးက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ တ၀ုန်းဝုန်းအသံပြုလေရဲ့………….
(pics from jimmy lao)
Posted by တီချမ်း at 6:20 AM9comments: Links to this post
ချစ်ရတဲ့ မီးဏီ ရေ….
(the pic from jimmy)
မီးဏီ စိတ်ညစ်နေတာ သိလို့ တီ ဒီစာလေးရေးပေးလိုက်တယ်နော်
တီ တို့ ကြိုးတန်းပေါ်လမ်းလျောက်ကျင့်ရအောင်လေ
မြေကြီးပေါ်အမြင့် စင်တီမီတာ နည်းနည်းလေးကနေစကြမယ်
အာရုံစိုက် ၊ လေ့ကျင့် ၊ သတိ ၊ မငိုနဲ့ ၊ မကြောက်နဲ့ ၊ စိတ်လဲ မတွေဝေစေနဲ့
ပြုတ်ကျမှာဘဲ။ ဘာဖြစ်လဲ? အားတင်းထား….
နောင်လဲ အများကြီး၊ ခဏခဏ ပြုတ်ကျနေအုံးမှာဘဲ……………….
ပြုတ်ကျနေအုံးမှာဘဲ ၊ ပြုတ်ကျနေအုံးမှာဘဲ ၊ ပြုတ်ကျနေအုံးမှာဘဲ
အဲဒီ ကြိုးတန်းရဲ့ တည်ရှိနေခြင်းကိုမေ့သွားမယ်၊ ပြုတ်ကျတတ်တာကိုလဲမေ့သွားမယ်
အဲဒါမှ ကြိုးတန်းကို ကောင်းကောင်းလျောက်တတ်သွားတယ်ဆိုနိုင် တဲ့ တနေ့ပေါ့
လူတစ်ယောက် ၁၉ ထပ်အမြင့် ကနေ ကြိုးတန်းလျောက်ရင်း ပြုတ်ကျလာတယ်။
ပြုတ်ကျလာနေတုံး တန်းလန်း မှ သူက ဟမ်းဖုန်းနဲ့ အင်တာနက်ကနေ အသက် အာမခံ
လူ့ဘ၀ ဆိုတာ မတော်တဆမှု တွေများလွန်းပါတယ်၊ ထောင်ချောက်တွေလဲအများကြီး
ဒါကြောင့် တီ တို့တတွေ နေ့တိုင်း၊ နေ့တိုင်း ကြိုးတန်းလျောက် ကျင့်ရမယ်လေနော်
မျက်နှာ ကိုပြုံးပြုံးလေးထား၊ ရင်ကိုမတ်၊ သတိ ကိုမပြတ်စေနဲ့၊ ဇွဲ နဲ့ ရှေ့ဆက်….
နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ် မျက်နှာအသစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ပါစေလေနော်။
နေ့လည် ၀၃ နာရီ ၄၁ မိနစ်
Posted by တီချမ်း at 1:42 PM 11 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 10:13 PM 22 comments: Links to this post
တခါတုံးက ကျွန်မ ယောက်ျားတယောက်ကိုချစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူက ကျွန်မကိုချစ်ရည်ရွှန်းလဲ့တဲ့ မျက်ဝန်း လေး တွေနဲ့ကြည့်ပြီး ပြုံးပြီးတော့ ပြောလာတယ်။
“တကယ်တော့ မင်းကို ကိုယ် လွတ်လပ်ခွင့်တွေအများကြီးပေးထားခဲ့ပါတယ်”တဲ့လေ။
အဲဒီအခိုက်မှာတော့ ကျွန်မ က သူ့ကို ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ပြန်ပြီး သတိပေး ရပါ တော့ တယ်…..
“ကျွန်မ ရဲ့လွတ်လပ်မှုက ကျွန်မ ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ပဲလေ၊ မောင်လာပေးနေဖို့မှမလိုတာ” လို့။
ချစ်နေကြတုံးကတော့ လူတွေက တယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေအတွက် တခြားတယောက်က သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လပ်မှုတွေကို နှစ်နှစ်ကာကာ လိုလိုလားလား ပေးဆပ်စတေး တယ်ဆိုတာမျိုးကို မျှော်လင့်တတ်ကြတယ်။ ပေးဆပ် လိုက်တဲ့လွတ်လပ်ခြင်းတွေက သူ့ရဲ့အချစ်တွေရဲ့လေးပင်ရှိူင်းနက်မှုနဲ့ တိုက်ရိုက် အချိုးကျနေသလိုမျိုးပေါ့။
တခါတလေ ကျွန်မတို့တတွေဟာ မလွတ်လပ်တဲ့သူ တယောက်ကိုချစ်မိတဲ့အခါ အဲလိုချစ်မိတဲ့အတွက် နာကျင်ခံစားကြရတယ်။ အဲ..လွတ်လပ်တဲ့ လူတယောက်ကို ချစ် မိတဲ့ အခါကျပြန်တော့ သူ့ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေကို ကိုယ့်အတွက်စတေး စေချင်ကြပြန် တယ်။
ချစ်သူရဲ့လွတ်လပ်မှု၊ အနေအထိုင်၊ အပြုအမူ၊ အပြောအဆို စတာတွေအားလုံးကို ကျွန်မတို့ တဦးတည်းနဲ့သာဆိုင်ချင် ပိုင်ချင်ကြတယ်။
မိုးမမြင် လေမမြင် ချစ်နေကြတုံးကတော့ ချစ်သူရဲ့လက်ထဲက အလှမွေးငှက်ငယ်လေးပဲဖြစ်ရ ဖြစ်ရ၊ စနစ်တကျ လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးခံထားရတဲ့ ကျားသစ်မလေးပဲဖြစ်ရဖြစ်ရ ကျေနပ်နေနိုင်တာ၊ ချစ်သူကိုလဲ အဲလိုပဲ ဖြစ်စေ၊ ခံစားစေချင်ကြသေးတယ်လေ။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်နေ့တော့ ကောင်းကင်မှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပျံသန်းခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ၊ တောထဲမှာ ကိုင်းပင်တွေကြားထဲမှာ ပျော်ပျော် မြူးမြူး ပြေးဆော့ခဲ့တဲ့ အချိန်တွေ ကိုလွမ်းလာပါလေရော။
ကျွန်မတို့တွေ ကိုယ့်ရဲ့လွတ်လပ်မှုတွေ ကို ကြည်ကြည်ဖြူဖြူ ပေးဆပ်ပြီးချစ်ခဲ့ကြတဲ့၊ သာယာလှပ ခဲ့တဲ့ ခဏတာ အချိန် လေးတွေ ကိုပဲ ပြန်လည် တမ်းတ၊ အောင်းမေ့၊ လွမ်းဆွတ်။
တသက်စာ ထာဝရ ချစ်ကြတယ်ဆိုတာ ကတိတွေနဲ့ တဖက်သားကို လက်ထိပ် ခတ်ဖို့မှ မဟုတ်တာဘဲလေနော်၊ ယုံကြည်မှုနဲ့ လွှတ်ပေးထားတဲ့ ချူပ်နှောင်ခြင်းတမျိုးပါ။
မောင်ရော ကျွန်မပါ သိခဲ့ကြပါတယ် ချစ်ခြင်းထဲမှာ ၁၀၀ % လုံးလုံး လွတ်လပ် တယ်ဆိုတာ မရှိဘူးလေ။ ခန္ဓာ ကိုယ်အရ အသွားအလာ က လွတ်လပ်တယ် ဆိုရင်တောင် စိတ်ထဲမှာတော့ ချစ်တဲ့ သူ လက်ကို အမြဲတွဲထားပြီး အတူတူထားခဲ့ကြဖူးတဲ့ ကတိတွေကို တိတ်တိတ်လေး သစ္စာစောင့်တည်လို့ ပေါ့။ ဟိုး မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကြီးရဲ့ အောက် ဘယ်ကိုပဲရောက်ရောက် ချစ်တဲ့ သူကိုသာ လွမ်းဆွတ် တမ်းတ သတိရ အောက်မေ့….
ကဲ ဘယ်မှာတုံး လွတ်လပ်မှု?
အသက်ကလေးတွေ ငယ်စဉ်ကတော့ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ ခေါင်းမာမှုတွေ၊ တဇွတ်ထိုးဆန်မှုတွေနဲ့ အတူ ဒွန်တွဲနေတာပါ။ နောက်တော့ ကျွန်မတို့ ရဲ့ လွတ်လပ် မှု တွေ ကို အချစ်နဲ့ လဲခဲ့ ကြတယ်လေ။ မောင်ဟာ ကျွန်မအတွက်၊ အဲလိုပဲ မောင့် ရဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေ ကလည်း ကျွန်မအတွက်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ တနေ့တော့ ကျွန်မတို့ ရုတ်တရက် လန့်နိုးသိနဲ့သိ လာကြတယ်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာ အတွင်းစိတ်ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းမှုတမျိုးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျွန်မ လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေကို စိတ်အေးအေးနဲ့ လုပ်နေနိုင်တယ်လေ။ ကျွန်မ က လွတ်လပ် တဲ့ သူပဲ၊ မောင့် ကို သစ္စာမဖောက်ခဲ့သလို ကိုယ့်ကိုယ်ကို လဲကျွန်မ သစ္စာမဖောက်ခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်မက ကောင်းကင်ပေါ်က လွတ်လပ်ငှက်ဖြစ်သလို တော အုပ်ထဲက လွတ်လပ်တဲ့ကျားသစ်မကလေးလဲဖြစ်နေပါသေးတယ်။ ကျွန်မတို့မှာ ကိုယ်စီ ကိုယ်ငှ လွတ်လပ် ပုံရိပ်တွေ၊ နေရာ ၊ အ၀န်းအ၀ိုင်းတွေ နဲ့ ပါ။
တခုပဲလေ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက်မတော်တဆ ချစ်ကြိုက်မိခဲ့ ကြတာပါ။
Posted by တီချမ်း at 11:04 AM 18 comments: Links to this post
ငါ ၁ ယောက်တည်း အိပ်ရာထ
ငါ ၁ ယောက်တည်း ထမင်းစား
ငါ ၁ ယောက်တည်း ရေချိုး
ငါ ၁ ယောက်တည်း အိမ်ကထွက်
ငါ ၁ ယောက်တည်း ဆေးရုံသွား
ငါ ၁ ယောက်တည်း ကားငှားစီး
ငါ ၁ ယောက်တည်း ခေါက်ဆွဲစား
ငါ ၁ ယောက်တည်း ကော်ဖီသောက်
ငါ ၁ ယောက်တည်း သီချင်းနားထောင်
ငါ ၁ ယောက်တည်း လည်ပတ်
ငါ ၁ ယောက်တည်း အိမ်ပြန်
ငါ ၁ ယောက်တည်း အိပ်
ငါ ၁ ယောက်တည်း အထီးကျန် .............
(တခါက ချစ်ခဲ့တဲ့ ဘ၀တခြားက သူ့အတွက်)
Posted by တီချမ်း at 9:31 PM 15 comments: Links to this post
နင်တိတ်ကြိုက် တဲ့ “ဃျေးဂျိုး” (jay-周杰伦)ရဲ့ နင်သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်း
နာခံစားပြီး နင့်အတွက် ဘာတာပြန်ထားပေးတယ် ဟိဟိ
ခံစားပြီး နည်းနည်းရေး “ကွန့်” ထားတယ်ပေါ့လေတွယ်နော်
ရူကနေပေမယ့် ဘျင်ညာ ကနေ၀ူးလေ နော် ခွိခွိခွိ
ကြီးတော့ နင်ရေ့ရာရို့ရအောင် နာ အော်ရီချင်တယ် လဲထည့်ပေးထားတယ်နော်
တကယ်လို့သာ ဒီလောကကြီးအပေါ်မှာ မင်းညည်းညူမှုတွေအရမ်းများနေရင်
ကျေးဇူးပြုပြီး တီဗီ ဖွင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါ အပြင်လောကမှာ
လက်ရှိ ရှိနေတာတွေကို တန်ဖိုးထားရအောင်လေ
မွေးရပ်မြေဆိုတာ တစ်ခုတည်းသော ပျောက်ဆုံးနေသော နိဗ္ဗာန်ဘုံဆိုတာ
မွေ့မွေ့လေးပြုံးလေ ငယ်ငယ်ကအိမ်မက်ကို တို့သိပါတယ်
မငိုပါနဲ့ ပိုးစုန်းကြူးလေးက မင်းကိုခေါ်ပြီးထွက်ပြေးပါစေ
အိမ်ကိုပြန်ခဲ့ပါတော့ ဟိုးတုံးက ချိုမြိန်မှုတွေဆီပြန်ခဲ့ပါတော့
ဒီလောက်လွယ်လွယ်နဲ့ အရှုံးမပေးပါနဲ့ တို့ပြောသလိုပဲလေ
လိုက်မမီ အိပ်မက်ကို ဖမ်းနေမဲ့အစား အိပ်မကိအသစ်ကိုပြောင်းပြီးမက်ပါ့လား
အရင်ဆုံး အချစ်ကို အကြိုက်ဆုံးအရောင်လေးဆိုးပေးပေါ့
အောင်မြင်ဖို့၊ နာမည် ကြီးဖို့ဆိုတာက ပန်းတိုင်မှမဟုတ်တာ
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပျော်အောင်နေနိုင်တာမှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတာ
ငယ်ငယ်က စက္ကူလေယာဉ်လေး အခုတော့ ငါ့လက်ထဲကို တပတ်ပြန်လည်လာပြီပေါ့
အသီးတွေလိုက်ခိုးခူးတုံးက ပျားတုပ်လို့ နောက်မလုပ်ရဲအောင်ကြောက်သွားတာ
စာချောက်ရုပ်ကို ငါမီနေတုံး လေကတိုက်တော့ သီချင်းလေးညည်းရင်း………. အိပ်မောကျ…………
ညနေ ဂစ်တာသံက ပိုးကောင်လေးတွေအော်မြည်သံကြားမှာ ပိုသာယာလို့……….
နေရောင်က လမ်းလေးပေါ်ထိုးတော့ စိတ်တွေပြိုမှာ မစိုးရိမ်ရတော့ဘူးပေါ့နော်
我靠着 稻草人 吹着风 唱着歌 睡着了
哦　哦　午后吉它在虫鸣中更清脆
哦　哦　阳光洒在路上就不怕心碎
Posted by တီချမ်း at 9:43 PM 21 comments: Links to this post
ညီ တစ်ညလုံးညီ့ဘလောခ်ကိုဖတ်ပြီး မှရေးထားတယ်အစကတော့ ကဗျာကိုမော်ဒန်ပုံစံရေးမလားလို့ပဲနောက်တော့မှညီကကလေးလေးပဲလေ
ညီ အန် ဂျဲ ဘွိုက်စ် လိန်
R and B ကိုငြင်း
နံနက် ၇း၀၇ မိနစ်
၁၄ (စနေ) မတ်လ ၂၀၀၉ ခုနှစ်
(ဟိဟိ တွေးချင်တာကို….မှာထည့် ပြီးချဲ့တွေးနော်
ဪ ဥပမာ-ဘွဲ့ ဘာညာပြောပါတယ်။
ဟွန်း ဒါပဲ မပြောချင်ဘူး
Posted by တီချမ်း at 11:20 AM 8 comments: Links to this post
အဖြေမှန်ကတော့ကောင်မလေးက အဲဒီကိုလူချော သူ့ကို နောက်တစ်ခေါက်များ အသုဘမှာတွေ့ရမလားဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့ကွယ်။
ဒီအထိမှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဖြေဆိုသူ သင်ဟာစိတ္တဇ ဆန်ဆန်တွေးတတ်နေပါပြီလို့ အဓိပ္ပာယ်ရတယ် လေနော်။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလေးဟာဆိုရင်ဖြင့် ကားနေတဲ့အမေကြီး (အမေရိကား)မှာ ရှိတဲ့နာမည်ကျော် စိတ်ပညာရှင် တွေက စိတ္တဇ ဆန်ဆန် လူသတ်မှုတွေပြုဖို့ စိတ်ဆန္ဒရှိတတ်တဲ့ သူတွေကိုစမ်းသပ်ခဲ့တာပေါ့ကွယ်။ စိတ္တဇ လူသတ်မှုနဲ့အဖမ်းခံထားရတဲ့ လူ ၉၁၄ ယောက်ကိုမေးတာ မေးခွန်းကိုမှန်အောင် ၉၀၄ ယောက်ကဖြေနိုင်ပါသတဲ့။
အဲတော့ အဖြေမမှန်တဲ့လူတွေက ငတုံးတွေ (အဲလေဟုတ်ပါဘူး ယောင်လို့)
အခုမေးခွန်းဖြေတဲ့ သူတွေထဲက အဖြေ “မမှန်” အောင်ဖြေနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက် ကတော့ အခြေအနေ ကောင်းပါတယ်ကွယ်။
ခုလဲ ဒီ မီနီ ဆာဗေးလေးမှာ ဖြေဆိုသူ စုစုပေါင်း ၁၅ ယောက်ထဲကနေ ၇ယောက်တိတိက မှန်အောင်ဖြေနိုင်တယ်ဆိုတော့ ၅၀ % နီးနီးပေါ့ကွယ်။
အင်းကြောက်စရာ ဘလောခ့်လောက ပါလားကွယ်ယို့။
အဖြေကိုသွေးထွက်အောင် “အမှန်” ဖြေဆိုနိုင်တဲ့ သူများဖြစ်တဲ့ (မဆုမွန် (ခ)ဦးမွန်၊ နွေးနေခြည်၊ ဘာတွေတုံး၊ သီဟသစ်၊ အမြဲစိမ်းဖြိုး၊ မိန်းမစိမ်းလေး နဲ့မမကွမ်) တို့ကတော့ အင်း ……
တီချမ်း သာသူတို့သူငယ်ချင်းဆိုရင်တော့ နဲနဲကင်းကင်းနေမယ်ကွယ်နော်။
ဦးမွန် လက်ဖက်လိုချင်သေးရင် စာတိုက်ကပို့ပေးပါမယ် မချစ်လို့တော့ ဟုတ်ဘူးနော် တီ ကကြောက်တတ်လို့ပါတော်။
ကဲကဲ ရထားပေါ်ကအန်တီလှလှကြီးကိုခေါ်ရင်ကြည့်ခေါ်ကြတော့နော် ဟင်း……..
(စတာနော် အားလုံးကို ခင်တော့ခင်တယ် လာတော့လည်တော့ဘူးနော် ဟီး)
အခု ဆိုရင်ဘယ်သူတွေနဲ့ ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေသင့်သလဲဆိုတာ
သိတန်သလောက်တော့ သိကြပြီထင်တယ်လေနော်။ (ဟိ ဒါလဲစတာနော် တကယ်မဟုတ်)
ဒီမေးခွန်းလေးဟာ ဆိုက်ကိုတက်စ် ဖြစ်တဲ့အတွက်
စိတ်နဲ့ဆိုင်တာလေးမေးထားပေမယ့် စိတ်မဆိုး ကြစေလိုပါဘူးနော်။ ဘာမှမရည်ရွယ်ပါဘူးလေနော်။အားလုံးကိုပျော်စေချင်တာပါပဲ။
ခုမေးခွန်းကို အသိဥာဏ်မမီ၍သော်လည်းကောင်း (ဟိဟိစတာနော်)၊ အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မဖြေဖြစ်လိုက်၍ သော်လည်းကောင်း ထိုသူတို့အတွက် နောက် ထပ် ဆိုက်ကိုတက်စ်လေးတွေလာပါအုံးမယ်လေနော်……..မျှော်ပေါ့လေကွယ်နော်
ဦးဦး၊ တီတီ၊ ကိုကို၊ မမ၊ သားသား၊ မီးမီးလေးတို့ဘ၀လေးတွေအားလုံး
ကျန်းမာ၊ချမ်းသာ၊လန်းဖြာပကတိ သာယာ လှပ ကြပါစေကွယ်။
ဒါလေးတွေ့ဖို့ တီ ဆိုက်တော်တော်များများဖတ်လိုက်ရပါတယ်လေနော်
အောက်မှာ အော်ရီဂျင်နယ် ပိုစ့်လေး ထည့်ပေးလိုက်တယ်လေနော်
A few! Days later the girl killed her own sister.
She was hoping that the guy would appear at the funeral again. If you answered this correctly, you think likeapsychopath. This wasatest byafamous American psychologist used to test if one has the same mentality asakiller. 914 arrested serial killers took part in this test and 904 answered it correctly.
Posted by တီချမ်း at 11:56 PM 13 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 7:04 PM 24 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 9:40 PM 21 comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 10:49 PM 11 comments: Links to this post
မ ကပြောတော့ မချစ်ရ
ထို့ကြောင့် နာရီ အချိန် နေရာ မမှတ်မိ
Posted by တီချမ်း at 8:50 PM 10 comments: Links to this post
ညီ ၁ ယောက်
Posted by တီချမ်း at 12:30 PM5comments: Links to this post
“နှင်းကျနေတဲ့ညကြီးမှာ မီးထိုးပြီးကားမောင်းရတာကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ”
လို့ အဲဒီမင်းသားကပြောတယ်.. ရှေ့တစ်ပေအကွာမှာ ဘာရှိနေလဲမမြင်ရ
မီးတန်းအဆုံးမှာပဲ လမ်းကဆုံးနေပြီလိုလို ထင်ရတယ်တဲ့.. တကယ်တမ်းမောင်းတော့
မီးတန်းဆုံးလည်း လမ်းကမဆုံး ဆက်မောင်းနေရတုန်းပဲတဲ့”
ရှေ့မှာရှိနေသေးတယ်.. မမြင်ရတဲ့ အကွေ့အကောက်တွေရော..
ကြိုသိနေတဲ့အဆင်းအတက်တွေရော.. အန္တရာယ်တွေရော..
ရင်ခုန်စွန့်စားစရာတွေရော အများကြီးပဲလေ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်
ညီညီိတို့က Forrest Gump ဇာတ်လမ်းထဲကလို.. "Run Forrest... Run" ဆိုတာနဲ့
ခြေကုန်သုတ်ပြေးတတ်ဖို့ကို ပတ်ဝန်းကျင်က ပုံစံသွင်းပေးတာ ခံခဲ့ကြရတာ...
ဒါပေမယ့် ဘယ်တော့မှ လမ်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်မသွားဘူး”
ဆိုပေမယ့်လည်း ပြေးနေရတဲ့ဘ၀ကတောင် အဓိပ္ပါယ်ရှိနေသေးတယ်လေ..
အဆုံးမှာဘာရှိလည်းကတော့ အဆုံးရောက်မှသိနိုင်မှာမို့ ကြိုစဉ်းစားစိတ်ညစ်မနေပါနဲ့တော့..
မပြေးနိုင်တဲ့ဘ၀တွေကို တွေးပြီး ကိုယ်ပြေးနေရတာကတောင်
အရသာရှိသေးတယ်လို့ တွေးကြည့်ပေါ့.. ကြယ်ရောင်တွေအောက်မှာ ပြေးရင်း လေတိုးတဲ့အရသာကိုခံစားကြည့်လိုက်ကြရအောင်လား.. ...
တီချမ်းအတွက် မှ နီညမ်း
Posted by တီချမ်း at 4:30 PM5comments: Links to this post
သွားလိုက်၊ ပြန်လိုက် နဲ့ အခေါက်ခေါက်အခါခါပါပဲလေ
လမ်းရဲ့တစ်ဘက်အဆုံးမှာ ခရမ်းရောင် ယုန်ကြီးတစ်ကောင်က ပြုံးတုံ့တုံ့နဲ့
ငါရှေ့ကို အားတင်းပြီးပြေးတယ်၊ လေဆန်ပြီးပြေးတယ် ဒါပေမယ့်
ဘယ်တော့မှ လမ်းရဲ့အဆုံးကိုရောက်မသွားဘူး ပင်ပန်းမှုတွေနဲ့ ပြန်လှည့်တော့လဲ...
နောက်တစ်ဘက် က လျောက်လို့ဘယ်တော့မှမဆုံးမယ့် လမ်းမကြီးဘဲ
ခရမ်းရောင်ယုန်ကြီးတစ်ကောင် ကလဲ လမ်းဆုံးမှာ လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်နဲ့ စိုက်ကြည့်လို့
တခါက ငါကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့ ရုပ်ရှင်လေးတစ်ကားကိုသတိရမိတယ်ဟာ……
ဇာတ်လမ်းထဲမှာ ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့မောင်လေးကိုခေါ်ပြီး
လမ်းမကြီးတစ်လျောက် အဖေ ကိုလိုက်ရှာတာပေါ့
တစ်လမ်းလုံး စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ပဲ ကြုံတွေ့ရတယ်လေ
အခုပြန်စဉ်းစား ကြည့်တော့…တကယ့် ကို မျက်လုံးစိမ်းစိမ်း၊ အေးစက်စက် နဲ့
တို့တွေကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ ခရမ်းရောင် ယုန်ကြီးတစ်ကောင်ရှိချင်ရှိနေမှာနော်
လူဘ၀မှာအချိန်တိုင်း တို့တွေဟာ မမြင်ရတဲ့ မျက်လုံးတစ်စုံနဲ့ စောင့်ကြည့်ခံနေရသလိုပဲ
နတ်တမန်တော်ရဲ့မျက်လုံးတွေလား? မိစ္ဆာ ရဲ့မျက်လုံးတွေလား?
ဒါမှမဟုတ် တကယ်ကို…တကယ့်ကိုပဲ ခရမ်းရောင်ယုန်ကြီးများလားနော်
စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ဆို ညီ ဘာလုပ်လေ့ရှိလဲဟင်?
၃လပိုင်း၊ ၁၁ရက်နေ့၊ ၂၀၀၉ ခုနှစ်။
Posted by တီချမ်း at 12:43 PM5comments: Links to this post
ငါတော့ နင့်ရဲ့ ဖွဖွအပြုံးလေးနဲ့
(အမြန်ဆုံးနည်းနဲ့ ပန်းကန်လုံးစီးပြီး ပြတင်းပေါက်ကို ဖန်ဆင်းပေးသော
နန်းညီ အား ကျေးဇူးတွေတပုံကြီး ဒလဟော တင်ပစ်လိုက်သည်။)
၁၁ နာရီ ၅၅ မိနစ်
Posted by တီချမ်း at 11:58 AM4comments: Links to this post
၁၀ရက်နေ့က တင်တဲ့ပိုစ့်ကို ၁၅ ရက်နေ့မှ သိရှိကာ
ဆွဲပေးသော်လည်း သိသိချင်း ချက်ချင်းကိုဆွဲပေးသောမောင်ပိုင်အား
ကျေးဇူးဦးပကာရ အထူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်အပ်ပါသည်။
၁၁ နာရီ ၃၉ မိနစ်
Posted by တီချမ်း at 11:39 AM No comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 2:04 AM6comments: Links to this post
အမှား လို့ ခေါ်နိုင်သေးရဲ့လား
ကျုးလွန်မိစေတဲ့ ‘‘အချက်’’ ကလဲ
‘‘အချစ်’’ ဆိုရင်လေ။ ။
Posted by တီချမ်း at 4:19 PM 8 comments: Links to this post
ငါ့ စိတ် နဲ့ အတွေးတွေ ဘော်လောမျောလို့
ရှေ့ က ကူးနေတာ ငါးလေးလား
အဲဒီ အပေါက်ပြဲကြီးရဲ့ဟိုတဘက်ကို ၀င်သွားရင်……..
ဘာသာတိုင်းမှာရှိတာ သေချာတဲ့ ‘‘ငရဲ’’ လား
ဒါပေမယ့် ‘‘မယုံကြည်သူ’’ အနေနဲ့လဲ
ငါဘာလို့ ဒီအချိန်မှာ ဒီနေရာမှာရှိနေတာလဲ
ဘာလို့ ငါ့ မှာမှ…
နတ်တမန်တော်တွေ သီချင်းဆိုနေကြတာ ငါကြားတယ်
အာရုံတွေလဲ နောက်လို့ ရှုတ်ထွေးကုန်ပါပြီ
Posted by တီချမ်း at 4:07 PM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 2:39 AM No comments: Links to this post
ဪ နုနယ်လှတဲ့ မီးတောက်လေးပါပဲ
ဪ နုနယ်လှတဲ့ မီးတောက်လေးရယ်
မေမေရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာလေး
တခါတလေ ငါလဲမင်းလိုပဲခံစားရပါတယ်။ ။
Posted by တီချမ်း at 7:05 AM4comments: Links to this post
မကိုင်ပါနဲ့ အဲ့ဒီ ဖုန်းကို မြည်နေစမ်းပါစေ တို့ပြန်အိပ်ကြရအောင်ပါ
တို့ရဲ့ တံခါးအပြင်ဘက်က ကမ္ဘာကြီးလည်နေစမ်းပါစေ
မင့်တစ်ယောက်သာ ငါ အမြင်ချင်ဆုံးလူပါ
မင့်ရဲ့ သူဌေးကိုပြောလိုက်ပါ မင်းနေမကောင်းဘူးလို့
ပြီးရင် မြန်မြန် အိပ်ရာထဲပြန်လာတော့ ဒီမှာ ငါအေးလှပြီ
ဒီကိုလာပြီး ငါ့လက်တွေကိုနွေးအောင်လုပ်ပေးပါအုံး ကောင်လေးရယ်
နောက်ပြီး စိတ်ပူနေတာလဲတော်တော့ ကြောင်ကိုအစာကျွေးပြီးပြီ
လာပါ အချစ်ရယ် အိပ်ရာထဲပြန်သွားကြရအောင်ပါ
မင်းကမင့်ရဲ့ကော်ဖီကို သကြား၊ နို့မှုန့်နဲ့သောက်နေချိန်မှာ
ငါ့ကလဲငါ့ရဲ့ အကြိုက် ဆေးလက်ဖက်ရည်ကြမ်းလေးနဲ့ငြိမ့်နေမှာပေါ့
မင်းက “ဟင်နရီ မီလာ” လုပ်လေ
ငါက “အနိုက်ရက်စ်နင်း” လုပ်မယ်
နောက်ဆုံးအချိန်မှာ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဇာတ်ပေါင်းကြတာပေါ့
Posted by တီချမ်း at 6:11 AM2comments: Links to this post
Posted by တီချမ်း at 5:28 AM2comments: Links to this post
ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းတွေ
(မားစ် ဂြိုလ်ပေါ်ကလူအတွက်ဆိုပြတဲ့ သီချင်း ၁၀ ပုဒ်)
(စိတ်မကောင်းစရာက ငါတို့ရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေ လွဲမှားတဲ့အချိန်မှာတွေ့ခဲ့ကြတယ်)
(အချစ် မတတ်နိုင်တာ ဘာမှမရှိ)
ခံစားမှု ပြယုဂ် တစ်ခုပါ
အချိန်ကာလ ရဲ့ပြယုဂ် တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး
(ကြောင်ချစ်မိတဲ့ ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ငါးကဘယ်လိုသိပါ့မလဲ)
သပ်သပ်ကိစ္စ နှစ်ခုပါ” လို့
ငါပထမဆုံးချစ်မိတဲ့ “မင်း” က
ကိုယ့် ကို ကိုယ် သိမှာမဟုတ်ဘူး
ဖြေ။ ။မကြိုးစားရင် ပျော်ရွှင်မှုကိုဘယ်လိုရမှာလဲ
“အချစ်” က ကျန်နေသေးတယ်
(နင်ဘယ်သူ့ဘေးမှာရှိနေနေ ငါ့ရင်ခွင်ထဲက ကွက်လပ်လေးပါ)
Posted by တီချမ်း at 11:25 PM5comments: Links to this post
Labels: ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ချစ်ခြင်းလေးတွေ